बाइबलीय भविष्यवाणी - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > बाइबिल भविष्यवाणी
भविष्यवाणी परमेश्वरको इच्छा र मानवजाति को लागी योजना प्रकट गर्दछ। बाइबलीय भविष्यवाणी मा, भगवान घोषणा गर्नुहुन्छ कि पश्चाताप र येशू ख्रीष्ट को उद्धार कार्य मा विश्वास को माध्यम बाट मानव पाप माफी छ। भविष्यवाणी ईश्वरलाई सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता र सबै कुरामा न्यायाधीशको रूपमा घोषणा गर्दछ र मानवतालाई उसको प्रेम, अनुग्रह र वफादारीको आश्वासन दिन्छ र विश्वासीलाई येशू ख्रीष्टमा ईश्वरीय जीवन बिताउन प्रेरित गर्दछ। (यशैया ४ 46,9: -11 -११; लूका २४: ४४-४24,44; दानियल ४:१;; यहूदा १४-१५; २ पत्रुस ३:१४)
बाइबल भविष्यवाणीको बारेमा हाम्रो विश्वास
धेरै इसाईहरुलाई अगमवाणीको समीक्षाको आवश्यकता छ, माथि देखाईएको छ, सही दृष्टिकोणबाट भविष्यवाणी हेर्न। यो किनभने धेरै इसाईहरूले भविष्यवाणीलाई बढावा दिएका छन् र दावी गर्दछन् कि उनीहरूले समर्थन गर्न सक्दैनन्। कसै-कसैको लागि भविष्यवाणी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यो तपाईंको बाइबल अध्ययनको सबैभन्दा ठूलो स्थान ओगटेको छ, र त्यो विषय तपाईं सब भन्दा सुन्न चाहानुहुन्छ। आरमागेडन उपन्यासहरू राम्रो बिक्री हुन्छन्। हाम्रो विश्‍वास बाइबलको भविष्यवाणीको बारेमा के भन्छ भनेर धेरै इसाईहरूले याद गर्नुपर्दछ।
हाम्रो कथनको तीन वाक्य छन्: पहिलोले भविष्यवाणी हामीलाई परमेश्वरबाट पाएको प्रकाशको अंश हो र यसले हामीलाई उहाँ को हुनुहुन्छ, के छ, के चाहनुहुन्छ, र उसले के गर्छ भनेर बताउँछ।
दोस्रो वाक्यले भन्छ कि बाइबलका भविष्यवाणीहरूले येशू ख्रीष्टमार्फत मुक्तिको घोषणा गर्दछन्। यसको मतलब यो होइन कि हरेक भविष्यवाणी माफी र ख्रीष्टमा विश्वास संग सम्बन्धित छ। हामी अझै भन्छौं कि अगमवाणी मात्र त्यस्तो स्थान हो जहाँ परमेश्वरले मुक्तिको बारेमा यी कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी यो भन्न सक्दछौं कि बाइबलका केही भविष्यवाणीहरू ख्रीष्टद्वारा मुक्तिलाई सम्बन्धीत छन् वा त्यो भविष्यवाणी परमेश्वरले ख्रीष्टमार्फत क्षमा प्रकट गर्ने धेरै तरिकाहरूमध्ये एउटा हो।
किनकि परमेश्वरको योजना येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित छ र भविष्यवाणी परमेश्वरले उहाँको इच्छा प्रकट गर्नुहुने एउटा अ ,्ग हो, त्यसैले यो भविष्यवाणी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ईश्वर येशू के हुँदै हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमार्फत सम्बन्धित छ भन्ने कुरा अपरिहार्य छ। तर हामी यहाँ प्रत्येक भविष्यवाणी इंगित गर्न कोशिस गरिरहेका छैनौं - हामी परिचय दिन्छौं।
हाम्रो कथनमा हामी भविष्यवाणी किन हुन्छ भन्ने बारे स्वस्थ परिप्रेक्ष्य दिन चाहन्छौं। हाम्रो कथन दाबी को विरोधाभास छ कि अधिकतर भविष्यवाणी भविष्य संग सम्बन्धित छ, वा यो केहि मानिसहरु मा केन्द्रित छ। भविष्यवाणीको बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसका बारे होईन र भविष्यको बारेमा होइन, तर पश्चाताप, विश्वास, मुक्ति र यहाँ र आजको जीवनको बारेमा।
यदि हामीले प्रायः सम्प्रदायहरूमा एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौं भने, धेरै व्यक्तिहरूले भविष्यवाणी क्षमा र विश्वासको बारेमा बताउँछन् कि भनेर म श doubt्का गर्छु। उनीहरू सोच्छन् कि उनी अन्य चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन्। तर भविष्यवाणी येशू ख्रीष्ट मार्फत उद्धारको बारेमा हो, र साथै अन्य धेरै कुराहरू। जब लाखौंले बाइबलको भविष्यवाणीलाई हेरेर संसारको अन्त्य पत्ता लगाउँदछन्, जब लाखौंले भविष्यवाणीलाई भविष्यमा हुने घटनाहरूलाई जोड दिन्छन्, यसले मानिसहरूलाई भविष्यवाणीको एक उद्देश्य प्रकट गर्नु हो भनेर सम्झाउन मद्दत गर्दछ। येशू ख्रीष्टको मुक्ति कार्यमार्फत मानव पापीहरूलाई क्षमा गर्न सकिन्छ।
म हाम्रो बयान को बारे मा केहि अधिक चीजहरु भन्न चाहान्छु। पहिलो, यो भन्छ कि मानव पापीहरूलाई क्षमा गर्न सकिन्छ। यो मानव पाप भन्न छैन। हामी मानवताको आधारभूत अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दैछौं, हाम्रो पापीपनको व्यक्तिगत नतिजा मात्र होईन। यो सत्य हो कि ख्रीष्टमा विश्वास गरेर व्यक्तिगत पापहरू क्षमा गर्न सकिन्छ, तर यो अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हाम्रो गल्ती प्रकृति, समस्याको जड, पनि क्षमा गरिएको छ। हामीसँग कुनै पनि पापको लागि पश्चात्ताप गर्ने समय र बुद्धि कहिल्यै हुँदैन। क्षमा सबै ती सबै सूचीबद्ध गर्न हाम्रो क्षमतामा निर्भर हुँदैन। बरु, यो हाम्रो लागि यो सम्भव बनाउँदछ कि ती सबै, र यसको मूलमा हाम्रो पापी प्रकृतिलाई, एक झटकेमा क्षमा गरिएको छ।
अर्को हामी देख्छौं कि विश्वास र पश्चात्ताप मार्फत हाम्रो पापी क्षमा भएको छ। हामी सकारात्मक ग्यारेन्टी दिन चाहन्छौं कि हाम्रो पापहरू क्षमा भयो र ती पश्चात्ताप र ख्रिष्टको काममा विश्वासको आधारमा क्षमा गरीयो। यो एक क्षेत्र हो जुन भविष्यवाणीको बारेमा छ। विश्वास र पश्चात्ताप एउटै सिक्काका दुई पक्ष हुन्। तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा एकै समयमा हुन्छन्, यद्यपि विश्वास पहिलो मा तर्क मा आउँछ। यदि हामीले विश्वास नगरी आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्‍यौं भने त्यस्तो प्रकारको पश्चातापले मुक्ति तर्फ डोर्‍याउँदैन। विश्वासको साथ पश्चात्ताप मात्र मुक्तिको लागि प्रभावकारी छ। विश्वास पहिले आउनुपर्दछ।
हामी प्रायः भन्छौं कि हामीलाई ख्रीष्टमा विश्वास चाहिन्छ। यो सहि छ, तर यो वाक्यले भन्छ कि हामीलाई उसको मुक्तिको कार्यमा विश्वास चाहिन्छ। हामी केवल उसलाई मात्र विश्वास गर्दैनौं - हामी उहाँमा केहि विश्वास गर्दछौं जसले हामीलाई क्षमा गर्न सक्षम गर्दछ। यो केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्न जसले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो - यो पनि उसले केहि गरेको छ वा उसले केहि गरेको छ।
यस कथनमा हामी उहाँको उद्धारको काम के हो भनेर निर्दिष्ट गर्दैनौं। येशू ख्रीष्टको बारेमा हाम्रो भनाइले उहाँ "हाम्रा पापका लागि मर्नुभयो" र उहाँ "परमेश्वर र मानिस बीचको मध्यस्थता गर्नुहुन्छ" भन्छ। यो मुक्तिको काम हो जसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ र जसद्वारा हामीले क्षमा प्राप्त गर्दछौं।
ईश्वरतान्त्रिक तवरले भन्ने हो भने, मानिसहरूले हाम्रो निम्ति ख्रिष्टले कसरी गर्न सक्दछन् भन्ने बारे कुनै ठोस विश्वास बिना नै ख्रीष्टमा विश्वास गरेर क्षमा पाउन सकिन्छ। ख्रिष्टको प्रायश्चितको बारेमा कुनै खास सिद्धान्त छैन जुन आवश्यक छ। मध्यस्थको रूपमा उहाँको भूमिकाको बारेमा कुनै खास विश्वासहरू छैनन् जुन मुक्तिका लागि आवश्यक छन्। यद्यपि यो नयाँ नियममा स्पष्ट छ कि क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युले हाम्रो मुक्ति सम्भव भएको थियो, र उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले हाम्रो निम्ति हस्तक्षेप गर्नुभयो। जब हामी विश्वास गर्दछौं कि ख्रीष्टको कार्य हाम्रो मुक्तिको लागि प्रभावकारी छ, हामी क्षमा अनुभव गर्दछौं। हामी उहाँलाई चिन्छौं र उहाँलाई मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा पूजा गर्दछौं। हामी जान्दछौं कि त्यसले हामीलाई उसको प्रेम र अनुग्रहमा ग्रहण गर्दछ, र हामी उहाँको मुक्तिको उपहारलाई स्वीकार्छौं।
हाम्रो कथन भन्छ कि भविष्यवाणी मुक्ति को यांत्रिक विवरण संग सम्बन्धित छ। हामी शास्त्रहरुमा यसको प्रमाण भेट्टाउँछौं कि हामी हाम्रो गवाही को अन्त मा उद्धृत गर्दछौं - लूका २४. त्यहाँ उठेको येशूले एम्माउस को बाटो मा दुई चेलाहरु लाई केहि कुराहरु बताउनुहुन्छ। हामी पद ४४ देखि ४ 24 उद्धृत गर्दछौं, तर हामी पद २५ देखि २ 44 सम्म पनि समावेश गर्न सक्दछौं: «र उहाँले उनीहरुलाई भन्नुभयो: हे मुर्खहरु, अगमवक्ताहरुले बोलेको सबै पत्याउनको लागी हृदयको ढिलो! के ख्रीष्टले यो कष्ट भोग्नुपर्दैन र उहाँको महिमामा प्रवेश गर्नुपर्दैन? र उहाँले मोशा र सबै अगमवक्ताहरु संग शुरू गर्नुभयो र सबै शास्त्रहरु मा उहाँको बारेमा के भनिएको थियो उनीहरुलाई व्याख्या गर्नुभयो "(लूका 48: 25-27)।
येशूले भन्नुभएन कि धर्मशास्त्र केवल उहाँको मात्र हो वा सबै भविष्यवाणीहरू उहाँकै बारेमा थिए। उहाँसँग पूरानो नियममा जानको लागि समय थिएन। केहि भविष्यवाणीहरू उनी बारे थिए र केहि उहाँको बारेमा अप्रत्यक्ष थिए। येशूले उनको बारे मा सीधै उल्लेख गरिएको भविष्यवाणीहरु वर्णन गर्नुभयो। प्रेरितहरूले लेखेका कुराको केही अंश चेलाहरूले विश्वास गरे, तर तिनीहरू सबैले विश्वास गर्न ढिलो भए। उनीहरूले कथाको केही अंश गुमाए र येशूले खाली ठाउँहरू भरे र तिनीहरूलाई यो व्याख्या गर्नुभयो। यद्यपि एदोम, मोआब, अश्शूर वा इजिप्टका केही भविष्यवाणीहरू र केही इस्राएलको बारेमा थिए भने अरूहरू मसीहको पीडा र मृत्यु र उनको पुनरुत्थान महिमाको बारेमा थिए। येशूले तिनीहरूलाई यो व्याख्या गर्नुभयो।
यो पनि याद गर्नुहोस् कि येशूले मोशाको पुस्तकबाट शुरू गर्नुभयो। तिनीहरूमा केही मसीहसम्बन्धी भविष्यवाणीहरू थिए, तर प्राय: पेन्टाटुक येशू ख्रीष्टको बारेमा बेग्लै किसिमले छन् - मसीहको कार्यको भविष्यवाणी गर्ने टाइपोलोजी, बलिदान र पुजारीको रीतिथिति। येशूले यी अवधारणाहरूको पनि वर्णन गर्नुभयो।
पद ४४ देखि ४ 44 ले हामीलाई अझ धेरै बताउँछ: «तर उहाँले उनीहरुलाई भन्नुभयो: यी मेरा वचनहरु हुन् जुन मैले तिमीहरुलाई भने जब म तिमीहरुसंग थिएँ: मोशाको व्यवस्था, अगमवक्ताहरु र मेरो बारेमा लेखिएको सबै कुरा पूरा हुनु पर्छ। भजन »(v। ४४) मा। फेरि, उनले भनेनन् कि हरेक एक विवरण उनको बारेमा थियो। उसले के भन्यो कि उसको बारेमा भागहरु पूरा हुनु पर्ने थियो। मलाई लाग्छ कि हामी जोड्न सक्छौं कि उसको पहिलो आगमन मा सबै कुरा पूरा हुन सकेन। केहि भविष्यवाणीहरु भविष्य को लागी संकेत गर्दछ, उनको दोस्रो आगमन को लागी, तर जस्तै उनले भने, ती पूरा हुनु पर्छ। न केवल भविष्यवाणी उसलाई औंल्यायो - कानूनले उसलाई पनि औंल्यायो, र उसले हाम्रो मुक्ति को लागी गर्ने काम।
पद 45 48-: "तब उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनुभयो ताकि तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई बुझे, र तिनीहरूलाई भने:" यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले कष्ट भोग्नुहुनेछ र तेस्रो दिनमा उहाँ बौरेर उठ्नुहुनेछ; र उहाँकै नाममा सबै व्यक्तिहरू बीचको पापको क्षमाको लागि पश्चातापको प्रचार गर्दछ। यरूशलेममा सुरू गर्नुहोस् र यसको गवाही दिनुहोस्। यहाँ येशूले उहाँलाई चासो लाग्ने केही भविष्यवाणीहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। भविष्यवाणीले मसीहको दु: ख, मृत्यु र बौरिउठाइलाई मात्र दर्साएन - भविष्यवाणीले पश्चाताप र क्षमाको सन्देशलाई पनि औंल्यायो, त्यो सन्देश सबै मानिसहरूलाई प्रचार गरिनेछ।
भविष्यवाणीले धेरै फरक कुराहरु लाई छुन्छ, तर यो को बारे मा छ कि सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा र यो प्रकट गर्दछ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी मसीह को मृत्यु को माध्यम बाट क्षमा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य हो। जसरी येशूले भविष्यवाणीको यस उद्देश्यलाई इम्माउसको बाटोमा जोड दिनुभयो, त्यसरी नै हामी हाम्रो कथनमा यो भविष्यवाणीको उद्देश्यलाई जोड दिन्छौं। यदि हामी भविष्यवाणी मा रूचि राख्छौं भने, हामी यो अंशको यस अंशलाई नछुटाउन निश्चित हुनुपर्छ। यदि हामीले सन्देशको यस भागलाई बुझ्दैनौं भने अरू केहीले हामीलाई सहयोग गर्दैन।
प्रकाश १ :19,10: १० पढ्नु चाखलाग्दो कुरा हो जुन यस कुरालाई मनमा राख्दै: "येशूको गवाही भनेको भविष्यवाणी गर्ने आत्मा हो।" येशूको बारेमा सन्देश भविष्यवाणीको आत्मा हो। यो सबै यस बारेमा छ। भविष्यवाणीको स्वभाव येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
तीन अन्य उद्देश्यहरू
हाम्रो तेस्रो वाक्यले भविष्यवाणीको बारेमा धेरै विवरणहरू थप्दछ। उनी भन्छन्: "यस भविष्यवाणीले परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता र न्यायाधीशको रूपमा सबैभन्दा माथि घोषणा गर्दछ र मानिसजातिलाई उनको प्रेम, अनुग्रह र विश्वासको आश्वासन दिन्छ र विश्वासीलाई येशू ख्रीष्टमा ईश्वरीय जीवनको लागि प्रेरित गर्दछ।" यहाँ भविष्यवाणीका अन्य तीन उद्देश्यहरू छन्। सर्वप्रथम, यसले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर सबै कुराको सार्वभौम न्यायाधीश हुनुहुन्छ। दोस्रो, यसले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर मायालु, दयालु र विश्वासी हुनुहुन्छ। र तेस्रो, त्यो भविष्यवाणीले हामीलाई ठीकसँग बाँच्न हौसला दिन्छ। यी तीन उद्देश्यहरूमा नजिकबाट हेरौं।
बाइबलको भविष्यवाणीले भन्छ कि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँसित सबै कुरामा अधिकार र शक्ति छ। हामी यशैया: 46,9: -11 -११ उद्धृत गर्छौं, यो अंशलाई समर्थन गर्ने एउटा खण्ड। "विगतलाई याद गर्नुहोस्, जस्तो कि यो प्राचीन कालदेखि थियोः म परमेश्वर हुँ, र अरू कोही परमेश्वर छैन, जसको जस्तो केही छैन। मैले सुरुबाट के आउने छ भनेर घोषणा गरेको छु, र समय अगाडि के भयो जुन अहिलेसम्म भएको छैन। म भन्छु: मैले के निर्णय गरेको छु, र मेरो दिमागमा रहेका सबै कुरा म गर्छु। म पूर्वबाट एउटा चीललाई बोलाउँछु, टाढा देशबाट टाढा मानिसबाट मैले निर्णय लिनु पर्छ। मैले भनें, म यसलाई आउन दिनेछु; मैले जे योजना गरेको छु, म पनि गर्छु।
यस खण्डमा, भगवान्‌ले भन्नुभएको छ कि सबै कुरा कसरी समाप्त हुन्छ भनेर उहाँ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ, यो सुरु भए पनि। सबै कुरा भइसकेपछि शुरुदेखि अन्त बताउन गाह्रो छैन तर सुरुदेखि अन्तसम्मको घोषणा परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। प्राचीन समयमा समेत भविष्यमा के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न उनी सक्षम थिए।
केही व्यक्तिहरू भन्छन् कि ईश्वरले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उसले भविष्य देख्दछ। यो सत्य हो कि परमेश्वरले भविष्य देख्न सक्नुहुनेछ, तर यशैयाले औंल्याइरहेका त्यो बिन्दु होइन। उसले जे कुरा जोड दिन्छ त्यो त्यति मात्र हुँदैन जसलाई भगवानले पहिल्यै देख्नुहुन्छ वा चिन्नुहुन्छ, तर ईश्वरले इतिहासमा हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न। उसले यस बारे ल्याउनेछ, यदि यस्तो खण्डमा उसले पूर्वबाट एकजनालाई बोलाउन बोलाउँदछ भने पनि।
परमेश्वरले आफ्नो योजना पहिल्यै घोषणा गर्नुहुन्छ, र यो प्रकाश हो जुन हामी अगमवाणी भन्छौं - यस्तो कुरा जुन अग्रिम घोषणा गरिने छ। तसर्थ, भविष्यवाणी परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यको प्रकाशको भाग हो। त्यसोभए, किनकि यो ईश्वरको इच्छा, योजना र इच्छा हो, त्यसैले यो पक्का हुन्छ कि त्यो हुन्छ। ऊ आफुले मन पर्ने जे पनि गर्छ, जे गर्न उसले इच्छा गर्दछ किनकि त्यो गर्न शक्ति छ। उहाँ सबै देशहरूमाथि प्रभु हुनुहुन्छ।
दानियल ४: १-4,17-२४ ले हामीलाई एउटै कुरा बताउँछ। यो ड्यानियलले घोषणा गरे पछि तुरुन्तै हुन्छ कि राजा नबूकदनेसर सात बर्ष सम्म आफ्नो दिमाग गुमाउनेछन्, र तब उनी निम्न कारण दिन्छन्: "यो मेरो प्रभु राजा को बारे मा सर्वोच्च को सल्लाह हो: तपाइँ मानिसहरु संग संगै रहनुहुनेछ र तपाइँ खेत को जनावरहरु संग रहनु पर्छ, र तिनीहरूले तिमीहरुलाई गाई जस्तै घाँस खान, र तपाइँ आकाश को शीत मुनि सुक्नु हुनेछ र भिजेको हुनेछ, र सात पल्ट तिमीहरु लाई पार गर्नु भन्दा पहिले तिमी जान्दछौ कि उहाँसँग सर्वोच्च शक्ति छ। मानिसहरुको राज्य माथी र उनीहरु जसलाई चाहन्छन् दिन्छन् (दानियल ४: २१-२२)।
यसैले अगमवाणी दिइयो र गरियो ताकि मानिसहरूले जानून् कि परमेश्वर सबै मानिसहरू माझ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। उनीसँग कसैलाई शासकको रूपमा प्रयोग गर्ने शक्ति छ, मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा कम। परमेश्वर आफूले दिन चाहनुहुने प्रभुत्व दिन सक्नुहुन्छ किनकि उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ। यो बाइबलीय भविष्यवाणी मार्फत हामीलाई सुनाइएको सन्देश हो। यसले हामीलाई देखाउँदछ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ।
भविष्यवाणी हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हामी यसलाई पुरानो नियमका धेरै भविष्यवाणीहरूमा देख्न सक्छौं, विशेष गरी दण्डको बारेमा भविष्यवाणीहरूमा। परमेश्वर अप्रिय चीजहरू ल्याउनुहुन्छ किनकि मानिसहरूले खराब काम गरेका छन्। परमेश्वर न्यायकर्ताको रूपमा काम गर्नुहुन्छ जो इनाम दिने र दण्ड दिने अधिकार छ र जो यो पूरा भएको छ कि छैन भनेर पक्का गर्न सक्ने शक्ति छ।
हामी यहूदा १ 14-१-15 उद्धृत गर्दछौं: «यसले तिनीहरूबाट आदमको सातौं हनोक पनि भविष्यवाणी गर्‍यो र भन्यो: हेर, प्रभु आफ्ना हजारौं पवित्र जनहरूसँग न्याय गर्न आउनुहुन्छ र सबै मानिसहरूलाई सजाय दिन आउनुहुनेछ। ती सबै दुष्ट कामहरू तिनीहरूका लागि हुन् जुन उनीहरूले ईश्वरहीन भएका थिए। ती सबै पापीहरू जसले उहाँमाथि विश्वासघाती बोलेका छन्। ”
यहाँ हामी देख्छौं कि नयाँ नियमले एक भविष्यवाणी उद्धृत गर्दछ जुन पुरानो नियममा फेला पार्न सकिदैन। यो भविष्यवाणी एपोक्रीफल पुस्तक १ हनोकमा छ, र बाइबलमा समावेश गरिएको थियो, र यो भविष्यवाणीले के प्रकट गर्दछ त्यसको प्रेरित विवरणको हिस्सा भयो। यो प्रकट हुन्छ कि प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ - भविष्यमा छ - र उहाँ सबै मानिसहरूका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ।
प्रेम, दया र वफादारी
भविष्यवाणीले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर मायालु, दयालु र विश्वासी हुनुहुन्छ? भविष्यवाणी मा यो कहाँ प्रकट भएको छ? हामीलाई परमेश्वरको चरित्रको अनुभव गर्न पूर्वानुमानहरू आवश्यक पर्दैन किनकि ऊ सँधै उस्तै रहन्छ। बाइबलीय भविष्यवाणीले परमेश्वरको योजना र कार्यहरूको बारेमा केहि प्रकट गर्दछ, र यो हामीमा उहाँको चरित्रको बारेमा केहि प्रकट गर्दछ कि अपरिहार्य छ। उहाँको योजना र योजनाहरू अनिवार्य रूपमा हामी प्रकट गर्दछौं कि उहाँ मायालु, दयालु र विश्वासी हुनुहुन्छ।
यहाँ म यर्मिया २::१३ को बारेमा सोच्दै छु: "तेसैले तिम्रो तरीका र तिम्रो कर्ममा सुधार गर, र प्रभु तिम्रा परमेश्वरको आवाज पालन गर, र प्रभुले त्यो दुष्टको पश्चाताप गर्नुहुनेछ जुन उसले तिम्रो बिरुद्ध बोलेको छ।" जब मानिसहरु परिवर्तन हुन्छन्, भगवानले दिनुहुन्छ; उहाँ सजाय दिन चाहनुहुन्न; उहाँ एक नयाँ सुरुवात गर्न को लागी तयार हुनुहुन्छ। उहाँ क्रोध राख्नुहुन्न - उहाँ दयालु हुनुहुन्छ र क्षमा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
उनको वफादारीको उदाहरणको रूपमा हामी लेवी २ 3::26,44 मा गरिएको भविष्यवाणीलाई हेर्न सक्दछौं। यो खण्ड इस्राएलीहरूलाई चेताउनी हो कि यदि करार भ broken्ग गरियो भने तिनीहरू हराउनेछन् र कैदमा लगिनेछन्। तर त्यसपश्चात यो आश्वासन थपिएको छ: "तर तिनीहरू शत्रुको देशमा भए पनि म तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्दिन र म उनीहरूसँग असन्तुष्ट भएन, त्यसैले यो उनीहरूसँग हुनुपर्दछ।" यस भविष्यवाणीले परमेश्वरको विश्वासीपन, कृपा र प्रेमलाई जोड दिन्छ, यी विशिष्ट शब्दहरू प्रयोग नगरिए पनि।
होशे ११ ११ परमेश्वरको वफादार प्रेमको अर्को उदाहरण हो। इस्रायल कत्ति अवफादार थियो भनेर वर्णन गरेपछि पनि पद 11-8 मा यस्तो लेखिएको छ: "मेरो मुटु बिभिन्न छ, मेरो सारा दया आगोमा छ। म क्रोधित भए पछि एप्रैमलाई बिगार्न कुनै कुरा गर्न चाहन्न। किनकि म परमेश्वर हुँ, म कुनै मानिस होइनँ र मँ तपाईंहरु बीचको संत हुँ र विनाशमा आउन चाहान्दिन। यस भविष्यवाणीले परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई निरन्तर प्रेम देखाउनुहुन्छ।
नयाँ नियमका भविष्यवाणीहरूले हामीलाई यो पनि आश्वासन दिन्छ कि परमेश्वर मायालु, कृपालु र विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुहुनेछ र हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। हामी उहाँसँगै बस्नेछौं र सदासर्वदा उहाँको प्रेमको आनन्द लिनेछौं। बाइबलीय भविष्यवाणीले हामीलाई यो आश्वासन दिन्छ कि भगवानले यो गर्न चाहानुहुन्छ, र भविष्यवाणीहरूको विगतका पूर्तिहरूले हामीलाई यो आश्वासन दिन्छ कि उहाँसँग यो गर्ने शक्ति छ र उसले जे गर्न चाहेको थियो ठीक त्यही गर्नुहोस्।
ईश्वरीय जीवनको लागि उत्प्रेरित
अन्तमा कथनले भनेको छ कि बाइबल भविष्यवाणीले विश्वासीहरुलाई ख्रीष्ट येशूमा ईश्वरीय जीवन बिताउन प्रेरित गर्दछ। यो कसरी हुन्छ? उदाहरणको लागि, यसले हामीलाई परमेश्वरतर्फ फर्कन प्रेरित गर्दछ किनकि हामीलाई आशा छ कि उहाँ हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ, र हामी सधैं राम्रो कुरा प्राप्त गर्नेछौं जब हामी उहाँले प्रदान गर्नुहुने कुरा स्वीकार्छौं, र हामी अन्ततः खराब प्राप्त गर्नेछौं जब हामी गर्दैनौं
यस सम्बन्धमा हामी २ पत्रुस 2: १२-१-3,12 उद्धृत गर्छौं: «तर प्रभुको दिन चोर जस्तै आउँछ; तब आकाश ठूलो दुर्घटनाको साथ पिघलनेछ; तर ती तत्वहरु तातोले पग्लनेछन्, र पृथ्वी र यसमा भएका कामहरूले उनीहरूको इन्साफ पाउनेछ। यदि ती सबै समाप्त हुन्छन् भने, तपाईं कसरी पवित्र परिवर्तन र धार्मिक प्राणिमा उभिनुपर्दछ।
हामीले डर मान्नु भन्दा प्रभुको दिनको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ, र हामीले ईश्वरीय जीवन बिताउनुपर्दछ। सम्भवतः केही राम्रो चीज हामीमा घटित हुनेछ यदि हामीले यो गर्यौं भने, र केहि कम हामीले चाहायौं भने। भविष्यवाणीले हामीलाई ईश्वरीय जीवन बिताउन प्रोत्साहित गर्छ किनकि यसले हामीलाई प्रकट गर्छ कि विश्वासीपूर्वक उहाँलाई खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ।
पद १२-१-12 मा हामी पढ्छौं: "... जो पर्खिरहेका छन् र परमेश्वरको दिनको आगमनको लागि संघर्ष गर्दैछन् जब आकाश पग्लिनेछ र तत्त्वहरू गर्मीबाट पग्लिनेछन्। तर हामी यसको प्रतिज्ञा पछि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको प्रतीक्षा गर्दैछौं, जहाँ न्याय बास गर्छ। यसैले प्रियहरू हो, जब तिमीहरू पर्खिरहेका छौ, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कपट हुन कोसिस गरौं, र हाम्रा प्रभु धैर्यवानले तपाईंको उद्धारको निम्ति हाम्रा प्रिय भाइ पौडेललाई दिएको ज्ञान अनुसार तिम्रो रक्षा गर्दछ। तिमीलाई लेखेको थियो। »
यस पदले देखाउँदछ कि बाइबलको भविष्यवाणीले हामीलाई व्यवहार गर्न र सही सोच्न, ईश्वरीय जीवन बिताउन र परमेश्वरसित शान्तिमा रहन हर प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्छ। त्यसो गर्ने एक मात्र तरिका, येशू ख्रीष्टमार्फत हो। तर यस विशेष पदमा, परमेश्वर हामीलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँ धीरजी, विश्वासी र दयालु हुनुहुन्छ।
येशूको चलिरहेको भूमिका यहाँ आवश्यक छ। परमेश्वरसँग शान्ति केवल सम्भव छ किनकि येशू पिताको दाहिने हाततर्फ बस्नुहुन्छ र प्रधान पुजारीको रूपमा खडा हुनुहुन्छ। मोशाको व्यवस्थाले येशूको उद्धार कार्यको यस पक्षलाई पूर्वचित्रण र भविष्यवाणी गर्यो; उहाँमार्फत हामी ईश्वरीय जीवन बिताउन, हर प्रयास गर्न, र आफूले स contract्क्रामक दागहरू हटाउन बल पाउँछौं। उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर हामी यो कुरामा विश्वस्त हुन सक्छौं कि हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् र मुक्ति र अनन्त जीवनको ग्यारेन्टी छ।
भविष्यवाणीले हामीलाई परमेश्वरको कृपा र येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाउन सक्ने आश्वासन दिन्छ। भविष्यवाणी मात्र एउटा चीज होइन यसले हामीलाई ईश्वरीय जीवन बिताउन प्रेरित गर्छ। हाम्रो भविष्यको इनाम वा सजाय निष्पक्ष भएर बाँच्नको लागि मात्र कारण होईन। हामी विगत, वर्तमान र भविष्यमा राम्रो व्यवहारको लागि प्रेरणाहरू पाउन सक्छौं। विगतमा किनभने परमेश्वर हामीप्रति भलो हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पहिले नै गर्नुभएका कामहरूका लागि उहाँ आभारी हुनुहुन्छ र हामी जे भन्छौं त्यही गर्न हामी इच्छुक छौं। हाम्रो बाँच्नको लागि प्रेरणा केवल परमेश्वरप्रति हाम्रो प्रेम हो; हामीमा भएको पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो क्रियाकलापमा उहाँलाई खुशी पार्न बनाउनुहुन्छ। र भविष्यले हाम्रो ब्यवहारलाई उत्प्रेरित गर्न पनि मद्दत गर्दछ - भगवानले हामीलाई सजायको चेतावनी दिनुहुन्छ किनभने सायद उहाँ यो चेतावनी हाम्रो व्यवहार बदल्न उत्प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ। यसले पुरस्कारको पनि वाचा गर्दछ, किनकि ती सबै हामीलाई उत्प्रेरित गर्छन्। हामी उसले दिने पुरस्कार प्राप्त गर्न चाहन्छौं।
व्यवहार सधैं भविष्यवाणीको कारण भएको छ। भविष्यवाणी भनेको केवल पूर्वानुमान मात्र होइन, यो परमेश्वरको निर्देशनहरू पनि तय गर्ने भन्ने हो। त्यसकारण धेरै भविष्यवाणीहरू सशर्त थिए - परमेश्वरले सजायको चेतावनी दिनुभयो र सजाय आउन नपरोस् भनेर पश्चात्तापको आशा गर्नुभयो। भविष्यवाणीहरू भविष्यको बारे बेकारको क्षुद्रताका रूपमा दिइएन - उनीहरूको वर्तमानका लागि उद्देश्य थियो।
जकरियाले अगमवक्ताहरुको सन्देश लाई परिवर्तन को लागी एक आह्वान को रूप मा सारांशित गरे: «यस प्रकार सेनाहरूका प्रभु यसो भन्नुहुन्छ: तपाइँको नराम्रो बाटोहरु बाट र तपाइँको दुष्ट कामहरु बाट फर्क! तर उनीहरुले मेरो आज्ञा पालन गरेनन् वा ध्यान दिएनन्, प्रभु भन्नुहुन्छ (जकरिया १: ३-४)। भविष्यवाणीले हामीलाई भन्दछ कि भगवान एक दयालु न्यायाधीश हुनुहुन्छ, र येशू हाम्रो लागी के गर्नुहुन्छ, हामी उसलाई विश्वास गर्छौं भने हामी बचाउन सक्छौं।
केही भविष्यवाणीहरूको लामो पहुँच हुन्छ र मानिसहरूले राम्रो या नराम्रो गरे कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर हुँदैन। सबै भविष्यवाणीहरू यस उद्देश्यका लागि थिएनन्। वास्तवमा, भविष्यवाणीहरू यति विस्तृत विविधतामा आउँदछ कि यो भन्न गाह्रो छ, एक सामान्य अर्थमा बाहेक, सबै भविष्यवाणीहरू के कामका लागि। केहि यस उद्देश्यका लागि हो, केहि त्यो उद्देश्यका लागि हुन् र त्यहाँ केहि जसहरू हामी पक्का छैनन् कि तिनीहरू केका लागि हुन्।
यदि हामी अगमवाणी जत्तिकै विविधताको बारे विश्वासको बयान दिन कोशिश गर्छौं भने हामी एउटा सामान्य भनाइ दिनेछौं किनकि यो सहि छ: बाइबलीय भविष्यवाणी एउटा तरिका हो जसमा परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ र भविष्यवाणीको सामान्य सन्देश परमेश्वरले गर्नुहुने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा हामीलाई सूचित गर्दछ: यसले हामीलाई येशू ख्रीष्टमार्फत मुक्तितिर डोर्‍याउँछ। भविष्यवाणी हामीलाई चेतावनी दिन्छ
आउँदै गरेको न्याय, यसले हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहको आश्वासन दिन्छ र त्यसैले हामीलाई पश्चाताप गर्न प्रोत्साहित गर्दछ र
परमेश्वरको कार्यक्रममा सामेल हुन